Usale emanxebanxeba olunywe ingulube | News24
Usale emanxebanxeba olunywe ingulube
UYAVEVA umndeni womfanyana oneminyaka engu 12 ubudala wakwaNyamazane ohlaselwe yingulube ngoLwesihlanu olwedlule yamlimaza kanzima.
Unina kaNtethelelo Zimu olimale kulesigameko uThandazile Ntuli utshele i-Maritzburg Echo ukuthi angeke kulimale ingane yakhe bese kuthuleka engathi akwenzekanga lutho. Uthe uthole ucingo ngoLwesihlanu emini esemsebenzini lumazisa ngokulimala kwendodana yakhe.
“Ngiphuthume ekhaya ngafica ingane inamanxeba emzimbeni wonke ingakwazi kwenzalutho sabe sesiyiphuthumisa esibhedlela ngoba yayopha kakhulu.”
Uthe sebebuya esibhedlela bazamile ukuxhumana nomnikazi wazo izingulube kodwa bangaphumelela.
“Sathi uma sesibuya esibhedlela simthinta ngocingo ukuze sizodingida udaba lokulimala kwengane wathi ngeke akwazi ukukhuluma nathi ngoba usadle amanzi ancizayo.”
Uthi wathembisa ukuthi nakanjani ngoMgqibelo uzofika ezobona ukuthi ingane ilimele kangakanani.
“NgoMgqibelo sesimfonela washiya angalazi ethi ayikho into azoyikhuluma nathi yena. Sabikela ikhansela lazama ukumthinta ngocingo kodwa nalo walithuka.”
UNtuli uthe okubuhlungu ukuthi indodana yakhe ilimale kade izihambela.
“Ibingadlali ngisho kude nasekhaya, ngabe ngiyezwa ukuthi ilimale ngakwakhe kodwa ilimalele ngasekhaya. Lezingulube zigcaluza yonke indawo umnikazi wazo uyahluleka ukuzigada.”
Uthe indodana yakhe yasizwa ukuthi kuqhamuke amalunga omphakathi abe eseyishaya ingulube.
“Babehamba ephaseji kanti kuzoqhamuka lengulube, abangani bakhe bakwazi ukuthi babaleke yena wawa nokuyilapho yamhlasela khona. Abamfica elele odakeni lapho ayelimalele khona bathi wayesephelelwa amandla edabuke umzimba wonke nasezinyaweni ekhala ngobuhlungu.”
Uthe kumanje uNtethelelo uhamba umtholampilo njengoba kufanele ashintshwe amabhandishi nsukuzonke.
“Asikwazi ukumshintsha thina amabhadishi ngoba emtholampilo bathi izilonda zakhe zibucayi kakhulu.
“Kufanele njalo aye emtholampilo ayoshintshwa ngoba abakwazanga ukuwatisha amanxeba akhe.”
UNtuli uthe uvule icala emaphoyiseni ase-Alexandra kodwa umphenyi wabuye wazama ukumphoqa ukuthi alesule.
“Okungiphatha kabi ukuthi umphenyi uthi angisule icala ngiyoxoxisana nomnikazi wengulube, ngingalisula kanjani icala ngilinyalelwe ingane nomnikazi wesilwane engafuni ukuxoxisana nami,” kusho yena.
Leliphephandaba lithole ukuthi akusona isigameko sokuqala somuntu ohlaselwe yingulube kulendawo.
“Ukhona nomunye oke wangeniswa esibhedlela emuva kokuhlaselwa ingulube yakhe lomuntu.
“Lezingulube zicekela phansi impahla, uma ubiyile zigubha umgodi zibulale ucingo. Asisakwazi kushiya lutho emnyango ngoba sibuya kungasekho ngenxa yazo lezingulube.”
Umnikazi wezingulube uSeh Majozi uthe ukhulumile nogogo wengane wathembisa ukuthi kuzohlelwa umhlangano babonane.
“Kuyiphutha ukuthi ngiyabaleka, ngizamile ukumfonela ugogo wengane wathi uzobuye abuyele kumina asho ukuthi singabonana nini.
“Mina ngizimisele ukuhlangana nabo ngixolise ngomonakalo owenziwe isilwane sami, angeke ngibaleke kube kunengane elimele,” kusho yena.